Iakora: Nanodina rongony efa nogiazana, zandary roa lahy nidoboka am-ponja
lundi, 11 novembre 2019 19:15
Olona roa, niaraka tamin’ny rongony 80 gony, no saron’ny Zandary tao Ranotsara Nord, Faritra Ihorombe ny 16 oktobra 2019. Nogiazana avy hatrany ireo rongony, niandry ny famotorana nialoha ny nanolorana ireo voampanga tamin’ny Fitsarana tao Ihosy ny19 oktobra 2019.
Nivoaka ny feo fa nisy nanodinkodina ireo rongony efa nogiazana. Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny Zandary avy ao amin’ny kaompania Ihosy, nidina tao Ranotsara Nord. Zandary dimy no voakasiky ny fanadihadiana. Nahitana rongony telo gony tao amin’ny efitra fitoeran’ny fitaovam-piadian’ny zandary tao an-toerana.
Tao anatin’izay no nivoahan’ny resaka fa nomen’ny lehibeny baiko ny Zandary telo tao hanakalo apombo ny rongony tamin’ny gony sasany. Voamarina io fanodinkodinana entana efa nogiazana io tao anatin’ny fanadihadiana lalina, ary niaiky ny fisiany ireo nanatanteraka izany. Nanome alalana ny hanenjehana azy ireo ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, ny Jeneraly Richard Ravalomanana, ny fiandohan’ity volana novambra ity.
Zandary dimy lahy no natolotra ny Fitsarana tao Ihosy taorian’ny famotorana. Nahazo fahafahana vonjimaika ny telo, voatazona am-ponja kosa ny lietnà iray sy zandary prinsipaly kilasy manokana iray taorian’ny didy savaranonando nivoaka.